Vinicunca: njirimara, ọzụzụ na njem nleta | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu okwu banyere ugwu mara mma nke ukwuu wee bụrụ otu n'ime ebe kachasị mma na ebe nkiri ọhụrụ na Peru. Ọ bụ maka ugwu Vinicunca. A makwaara ya site na aha ugwu nke agba 7 ma dị na Peru. Ọ dị ihe karịrị 100 kilomita site na obodo Cusco, ọ nwere elu ugwu nke mita 5.200 karịa ọkwa mmiri.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, ọdịdị ala na ntọala nke ugwu Vinicunca.
2 Ihu igwe nke Vinicunca
3 Njem Vinicunca
Aha Vinicunca sitere na egwurugwu. Ọ bụ nhazi ugwu nke nwere ụda dị iche iche n'ihi nsonye dị mgbagwoju anya nke mineral dị iche iche na-etolite ya. Ndagwurugwu na elu ugwu ahụ nwere ntụpọ dị iche iche na ụda niile anyị na-ahụ acha odo odo, odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọbara ọbara, pink, na ọdịiche ndị ọzọ nke agba ndị a. Ọ bụ otu n'ime ebe ndị njem nleta kachasị mkpa na mpaghara a dum. Afọ ole na ole gara aga, ice gbara ya gburugburu ka ị ghara ịnụ ụtọ ugwu a. Kemgbe 2016, ọtụtụ narị ndị njem nleta eletala ebe a ma bụrụ otu n'ime ebe ndị a kacha eleta na Cusco na Peru.
N'ihi oke agba ọ na-agwakọta, amaara aha ya nke ugwu 7 agba na-asọpụrụ egwurugwu. Dika nyocha di iche iche, otutu agba di iche iche bu n'ihi otutu ihe omimi nke eji eme ya. All mineral ndị a na-ekpuchi ebe ahụ ma bụrụ ihe ndị sitere n'okike nke malitere ịmalite ihe dịka nde afọ 65 gara aga. E guzobere mineral ndị a mgbe mmiri na mmiri ozuzo kpuchitere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ugwu ya niile. Ka oge na-aga, ihu igwe dị egwu nke mpaghara a emeela ka snow ghara ịdị na ọ bụ ebe ahụ ka a ga-atụ anya agba niile nke ugwu a.
Ọ hụrụ na Andes nke Peru na nzuko a nwere elu nke 5.200 mita n'elu oke osimiri. Mpaghara a dum bụ nke obodo Pitumarca, onye kpọrọ ya Cerro Colorado. Iji rute ugwu a, ị ga-agafe ihe dị ka 100 kilomita site na obodo Cusco. Mgbe ahụ ị ga-eme njem nke ihe dịka elekere 2 n'okporo ụzọ awara awara nke dị na ndịda ugwu Peruvian, nke bụ nke rutere Pitumarca. Njem ahụ na-aga n'ihu n'okporo ụzọ ahụ gaa n'obodo Pampa Chiri. Njem a dị kilomita 5 ma nwee ike ime ma ụkwụ ma ịnyịnya.
Ihu igwe nke Vinicunca
Ihu igwe nke mpaghara a bụ ụdị nke mpaghara kachasị elu. Ya mere, ihu igwe bụ tumadi oyi. Mmiri ozuzo, ikuku na oria ugwu nwere ike ibu nnukwu ihe mgbochi nye ndi njem choro iga ebe a di egwu. Okpomoku di nfe kari 0 ° C. Maka nke a, oge kachasị mma iji mee njem a bụ oge ọkọchị. Oge a na - esite na ọnwa Eprel ruo Ọktọba. N'oge a o yikarịrị ka a ga-enwe mmiri ozuzo na ihu igwe dị ala.
Y’oburu n’atụmatụ ị mee nleta a n’oge udu mmiri, ọ ga-adị mma ka ị yiri poncho nke ga - echebe gị pụọ na mmiri ozuzo. Ọnọdụ ihu igwe a pụtara na ahịhịa na anụmanụ ga-abụ ọnọdụ nke ụmụ anụmanụ na-ahụkarị site na mpaghara dị elu mana ọ bụ ihe ịtụnanya. N’etiti anụmanụ ndị pụtara ìhè bụ llamas, alpacas na vicuñas. Ndị bi na mpaghara ahụ niile na-ahụ maka ịzụ ịnyịnya nke ha na-enye maka ịbuga ndị ọbịa. Otu ihe di n’ihe banyere osisi ogwu bu na ha no otutu ahihia ndu nke amara aha ya ichu.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga Vinicunca na-enwe ndị a kpam kpam eke na agba ma na a kpokọtara akụkụ, ị ga-emerịrị njem siri ike. Nzukọ a mara mma na-abụbu okporo ụzọ snow mara mma nke a maara dị ka Ausangate. Kemgbe ọtụtụ afọ, ugwu a na-ewu ewu dịka glaciers gbazee. Nwere ike ịga nzukọ a site na njem dịka njem nleta.
Enwere ọrụ dị iche iche dabere na nhazi na oge ị ga-anọ. Ọrụ na-abụkarị otu ma ọ bụ ụbọchị abụọ. Imirikiti ọrụ ndị a na-enwekarị a iga, nri, tiketi na ọkachamara ndu onye na-ahụ maka ịkọwa otu Vinicunca si malite na ihe njirimara ya. N'ime obodo Cusco enwekwara ndị ọrụ njem nleta dị iche iche na-enye ọrụ ndị a.
Nwere ike nweta njem gị onwe gị, ma ọ bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ mgbagwoju anya. Iji nwee ike ịga njem na nke gị, ị ga-eji bọs gaa Sicuani si n'obodo Cusco. Busgbọ ala a na-ewekarị ihe dị ka awa abụọ na nkeji iri anọ. Ozugbo ị ruru ebe ahụ, ị ​​ga-aba ụgbọ ala gaa obodo nke Quesiuno. Ozugbo ịmechara njem a, ị ga-amalite ije dị ogologo ruo ugwu Vinicunca. Ọnụ ego nke tiketi ịbanye bụ 40 naanị.
Ọ bụrụ na ị gaje ịga ije, ị ga-amarịrị nsogbu ugwu a. Ma ọ bụ na ije dị ihe dịka awa 4 na, ọ bụ ezie na ọ dịghị ize ndụ, ọ na-achọ mgbatị ahụ dị elu. Ọ bụrụ n ’ịnọ n’ ezigbo ahụ́ na ị nọ eji mee ogologo ije, ị ga-enwe nsogbu ịme njegharị. E nwere akụkụ ụfọdụ nke ugwu dị egwu ma na elu ugwu. Agbanyeghị, ihu igwe dị oke egwu ga-ewere dị ka otu n'ime nsogbu kachasị ike na-eweta nnukwu nsogbu maka njem. Bọchị na-atụ oyi nke ukwuu ma ifufe na-ajụkarị oyi. Elu ugwu nke ebe a nwere ike ibute oria ugwu a makwaara dị ka soroche na ndị dị iche iche. Ya mere, ịmalite ịmalite ọtụtụ ụbọchị n'obodo Cusco.
Ozugbo ị nọrọ ụbọchị ole na ole ịga obodo Cusco, ị ga-eyi uwe na-ekpo ọkụ nke ọma iji jee ije. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọ na-adịghị atụle na ezi ahụ ọnọdụ ọ ka mma ịgbazite a ịnyịnya. Gaghị enwekwa okpu, blanket, sunscreen, thermal ogologo ọkpa, akpụkpọ ụkwụ dị mma maka ije na poncho mmiri ozuzo. Anyị na-echeta na ọbụghị naanị njem ahụ siri ike, mana anyị ga-enwe nsogbu nke ihu igwe.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Ugwu Vinicunca na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Vinicunca